TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY « VISIOCONFERENCE » 07 APRILY 2021
TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY « VISIOCONFERENCE »
07 APRILY 2021
NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY VISIOCONFERENCE NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY NOTARIHIN’NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA ARY NAHITANA NY PRAIMINISITRA SY IREO MINISITRA ISAN-TOKONY :
NOHAMAFISINA IREO FEPETRA HIADIANA AMIN’NY VALANARETINA COVID-19 :
Nohamafisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny fanatanterahana ireo fepetra rehetra nambaran’Atoa Filoha nandritra ny kabary nataony hoentina miatrika ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina COVID-19:
- Ny Ampitomboina ireo CTC mandray marary eto Antananarivo, efa nisokatra ny etsy Alarobia nanomboka omaly, hisokatra tsy ho ela ny etsy Ankorondrano, ny etsy amin’ny By Pass noho ny fitombon’ny marary. Miampy ny etsy Mahamasina, Village Voara ary etsy Ivato (MMBC ex CCO) izay efa niasa andro vitsivitsy izao. Ireo CHU hopitaly lehibe rehetra eto an- drenivohitra dia itohy ny fandraisana mararin’ny Covid “formes graves” arakaraky ny fisian’ny toerana satria hampitomboina ireo “services” ho vahana hahafahana mandray ireo marary tena misy fahasarotana. Tsy azon’ny fianakaviana atao ny mamangy na manaraka ireo olona voan’ny covid any amin’ny CTC sy ny toeram-pitsaboana. Ferana ho olona iray ihany no mahazo manatitra sakafo ho an’ny fianakaviana, izay tsy tokony hifanerasera amin’ireo marary mihitsy fa omena ny tompon’andraikitra ny sakafo ateriny ho an’ilay marary.
- Hisy ny lamina manokana handrindrana ny fitantanana ireo fanafody fitsaboana ny covid ka hisy ny fanaraha-maso izany eny anivon’ny CTC, ny Hopitaly ary ireo CSB. Tsara marihana fa tsy tokony hividy ny fanafody natokana hitsaboana amin’ny covid ireo marary eny anivon’ireo toeram- pitsaboana ara-panjakana : toy ny azythromicine, magnésium, vitamine C, lovenox, dexamethasone, CVO, CVO Plus. Iharan’ny fanasaziana goavana ireo izay tompon’andraikitra mivarotra izany. Ny fanafody fitsaboana aretina mitaiza sy ireo aretina hafa kosa dia ny marary ihany no miantoka izany
- Mitohy ny fametrahana sy famatsiana oxygène ireo toerana mandray mararin’ny Covid.
- Tsy andoavam-bola ny fanaovana fitiliana Covid etsy amin’ny HJRA sy etsy amin’ny Village Voara ary maimaim-poana ny fanomezana ny taratasy fanamarihana ny fitiliana. Iharan’ny fanasaziana ireo izay mitaky vola amin’ireo olona tonga manao fitiliana.
- Hamafisina fa maimaim-poana ny fanaovana scanner mahakasika ny COVID eny amin’ireo hopitaly manarapenitra rehetra manerana ny Nosy.
- Hisy ireo fiara manokana ahitana miaramila sy mpitsabo hitety ireo faritra ahitana marary betsaka, ka izy ireo no hizara fanafody sy hijery ifotony ireo marary sy ireo mitondra ny otrikaretina na ireo ahiana ho mitondra ny otrikaretina manerana an’Antananarivo sy ny manodidina (approche syndromique).
- Manao antso avo ny fitondram-panjakana ho an’ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy tsara sitrapo izay vonona hanolo-tanana amin’ny fitsaboana ireo mararin’ny aretina covid any amin’ny hopitaly sy ny CTC rehetra manerana ny Nosy. Afaka manatona ny ministeran’ny fahasalamana izy ireo manomboka rahampitso ao amin’ny kabinetran’ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka amin’ny fanaovana ny taratasy sy ny fifanaraham- piaraha-miasa amin’izany.
- Hametraka ireo hotely/hopitaly isika hanampiana ny toerana handraisana ireo mararin’ny Covid. Hametrahana mpitsabo miisa 02, mpitsabo mpanampy miisa 8, sy fanafody fitsaboana momba ny covid ary “concentrateurs d’oxygène” ireo toerana ireo. Handoavam-bola kosa io toeram-pandraisana marary vaovao io, fa ny fanjakana no hamaritra ny sandan’izany miaraka amin’ny tompon’ny hotely fandraisam-bahiny.
- Ho an’ireo sidina anatiny izay mbola afaka miodina ankehitriny dia manao fitiliana eny amin’ny seranam-piaramanidina avokoa, ireo mpandeha rehetra ka adin’ny 03 mialoha ny fiaingana no ahatongavan’izy ireo eny amin’ny seranana mba hanamorana ny fanatanterahana izany.
FAMATSIAN-DRANO FISOTRO MADIO ANY ATSIMO:
Maroalimainty, Andranobory, Tsihombe no hisitraka ireo fitaovana fanadiovan-drano masira ho lasa rano fisotro madio (machine de désalinisation) izay novidiana. Noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ny tomban’ny sandam-bola nividianana ireo milina ireo araka ny fankatoavana nataon’ny Filankevitry ny Minisitra androany.
FANANGANANA NY « TASK FORCES » BAS MANGOKY:
Nomen’ny Filankevitry ny Minisitra alalana ny fananganana «task forces» handrindra sy handamina ny fanatanterahana ny tetikasa fanajariana ny lemak’i Bas Mangoky mirefy 60.000ha iarahana amin’ny orinasa Elite Agro LLC. Ity tetikasa ity dia hatao hampitomboana ny vokatra ara-tsakafo vokarina eto Madagasikara mba hahatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ao anatin’ny fotoana fohy. Manana ny fahaiza-manao manokana io orinasa io, ka izy no hampita izany sy hampiroborobo izany eto amintsika, ary ny vokatra vokarin’izy ireo dia amidy amin’ny vidiny mirary eto amin’ny tsena anatiny avokoa ny 70% ary ny 30% kosa dia omen’izy ireo ny fanjakana malagasy maimaim-poana.
Ministera sy tompon’andraikitra maro no ifandrimbona ao anatin’izany « task forces » izany ka ahitana ny ministeran’ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran’ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny ministeran’ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, ny ministeran’ny indostria, ny varotra ary ny asa-tanana, ny orinasa SPM, ireo olom-boafidy any amin’ny faritr’i Menabe, ireo tompon’andraikitry ny faritra any Menabe izay voakasiky ny tetikasa
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra ny didim-panjakana manendry ireto olom-panjakana ambony manaraka ireto :
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram- pahefana :
Atoa SOLONANTENAINA Therass Jacquard, dia voatendry hoe lehiben’ny distrikan’i Miandrivazo.
Ramatoa ANDRIANTSITOHARA Attianna Fara, dia voatendry ho Tale misahana ny « Etudes et des Normes ».
Ramatoa RABARY Niry Sariaka, dia voatendry ho Talem-paritra ao Itasy.
Ramatoa ANDRIAMISANDRATSOA née ANDRIANARISOA Nancy Rambao, dia voatendry ho Tale mpandrindra ny fitantana ara-bola ao amin’ny « Fonds National Foncier (FNF) ».
Ramatoa MAMINIAINA Lié, dia voatendry ho Tale misahana ny « Recherches et Développement » ao amin’ny Fonds National Foncier (FNF).
Atoa ANDRIANARIVELO Andry Maharo, dia voatendry hoe Tale mitantana ny « Laboratoire d’Analyse Médicale Malagasy ».
Ramatoa RAVAOARISOA Lantonirina, dia voatendry ho Tale Jeneraly misahana ny « Institut National de Santé Publique et Communautaire ».
Ramatoa SOAZANDRY Josuette, dia voatendry ho Talem-paritra ao Diana.
III - FANAFOANANA :
Foana ny didim-pitondrana laharana faha-2019-254 tamin’ny 07 mars 2019 nanendrena ny « Directeur de la Législation et du Contentieux ».
Foana ny didim-pitondrana laharana faha-2018-562 tamin’ny 20 jona 2018 nanendrena ny Sekretera Jeneralin’ny Governemanta.
Natao androany faha 07 Aprily 2021
03 APRILY 2021: LAHATENIN'NY FILOHAM-PIRENENA HO AN'NY VAHOAKA MALAGASY. NIVANTANA TAMIN'NY TVM